Ukuhendwa kaYesu — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Kukho izinto ezimbalwa ukuba usikhwezele umsa entliziyweni yam uYesu kufana nokuva maKristu - okanye nayiphi amaKristu - ukwenza efundelwayo ekuhleni ukholo lwabo ngokubhaptizelwa. Ndicinga ezinye abahlobo bam, nangona, abo kraca amaKristu entsha kwaye wokudideka kancinci ukuba kuthetha ukuthini. Ziva iindaba ezimnandi they've yenziwe izidalwa ezintsha, ukuba iintliziyo ezintsha, ukuba baye nahlanjwa, sigwetyelwe. Baze bacinga ukuba oku kuthetha ukuba uya kuphinda nzima okanye ubuso isilingo. Kodwa nabani who's engumKristu kangangeveki na onokumxelela na that's oyinyaniso. Umbuzo awuyikuba siza kujongana nesilingo. Umbuzo, Siya kusabela njani isilingo?
Ndafunda uthatyathwe kule veki wathi, "Sihendwa Bonke abantu. Akukho mntu uhlala ukuba singenakwaphulwa phantsi, ukuba ngaba isilingo ekunene, ufake ilapha kanye. "Ngaba le mazwi ayinyaniso? Ingaba kukho wakha umntu ngubani ukuxhathisa nezona kakuhle ibekwe izilingo? kakuhle, let's nibuyele uLuka 4:1-2:
uYesu, ezele nguMoya oyiNgcwele, wabuya eYordan, wesiwa nguMoya entlango, apho iintsuku ezimashumi mane ukuba ahendwe nguMtyholi. Akadla nto ngezo ntsuku, kwaye ekupheleni kwazo walamba.
Ekuqaleni, Masitsho ukuxoxa kanye apho sizibona Luke's ezilungileyo. Kancinci ngaphambili, kwisahluko ezintathu, UYohane umbhaptizi eshumayela ngoYesu nokubhaptiza abanye, noYesu ngokwakhe uza ukuba abhaptizwe nguye. UYohane iye wayebhaptiza kakhulu abantu, kodwa xa uYesu wabhaptizwa into eyahlukileyo kwenzeka. UMoya oyiNgcwele wehlela kuye ngokomzimba njengehobe; kwaye ilizwi livela ezulwini, lisithi, "Wena unguNyana wam oyintanda; nawe mna nguye. "Ngoko ke naku siye uThixo evakalisa uYesu ukuba abe ngaphezu nje umprofeti nje, ngaphezu nje uMesiya; UYesu kanye uNyana kaThixo.
Emva ukusixelela ntoni kwesi sibhengezo evela kuThixo, phambi ekusixeleleni uNyana obhaptiziweyo uThixo uya kwenza, Kanye usinika ngomlibo, ukusixelela ntoni Jesus' uzalwa. Emilibeni elihamba yonke indlela ukususela kuAdam. Ngoko ke apha kuba iNkosi uYesu, ngubani kuphela nguNyana kaThixo kaThixo, kodwa Yena Kwakhona kumnombo ka-Adam, umntu wokuqala. UYesu eyodwa. UYesu nguThixo-mntu.
Ngoko ke, ngubani ngcono ukujonga ukuba ufunde indlela esifanele sisabele esilingweni? Xa sijonga ezi vesi, siza kujonga izinto ezintathu esimele siyikhumbule xa sijamelene nesilingo.
mna. UThixo Ikuvumela kwaye Usebenzisa Izilingo njengenxenye yesicwangciso sakhe (1-2i)
uYesu, ezele nguMoya oyiNgcwele, wabuya eYordan, wesiwa nguMoya entlango, apho iintsuku ezimashumi mane ukuba ahendwe nguMtyholi.
Ngoko emva kokubhaptizwa kukaYesu, apho owamiswayo ukuba unguNyana kaThixo, endikholisiweyo nguye kakuhle uYise, unokulindela ukuba uMoya kaThixo iza kukhokelela uYesu ukukhiqa uKumkani uHerode ububi, okanye mhlawumbi ndimthumele kuye ngqo kuqalisa ubulungiseleli bakhe yokushumayela esenza imiqondiso nemimangaliso. Kodwa that's apho uMoya oyiNgcwele kukhokelela kuye. Endaweni uMoya oyiNgcwele kukhokelela kuye kwintlango. UMoya oyiNgcwele kukhokelela kuye kuloo ndawo apho umtyholi uya ukumlinga.
Ke kaloku, ngokuqinisekileyo iNkosi enguMongami, zonke-esazi uMoya oyiNgcwele uyazi ukuba kho uYesu ndawo, apho uSathana uya kumlinga - ngendlela efanayo ukuba uMoya oyiNgcwele wayesazi kwiZenzo 20, ukuba ukhokela uPawulos eYerusalem, kwaye ukuba uPawulos kutshutshiswa entolongweni apho. Uthi uPawulos ingozi ephambi kwakhe, ukanti sigqibe uPawulos ukuba aye ukuba ndishumayele iVangeli. Le meko yahluke. UMoya oyiNgcwele uyazi ukuba uYesu uza basenokufundiswa kwaye umngeni nguye uMtyholi, ukanti Andikhokelela khona apho kakade.
Kutheni uMoya oyiNgcwele ukuthumela uYesu entlango apho aya ahendwe? Xa ukukhanya God's isibhengezo ukuba uYesu unguThixo kukholekile kwaye uNyana kaThixo, kwaye Luke's wokuzalwa obonisa uYesu ukuba abe unyana Adam kwakunye, esi silingo icwangcisa umkhomba uYesu ukuqondakalisa ukuba Yena ngothe yena kanye wavakalisa ukuba. Le ungquzulwano entlango unika uYesu nqanaba ukubonisa ngokwakhe, ukuba abe nguThixo-mntu.
It's phantse njengabaninzi indlela basabela Miami Heat eli xesha. Lebron uYakobi ke MVP ye league, kodwa iqela lakhe can't kuphumelela lobuntshatsheli. Ke emke Cleveland Cavaliers, kwaye amaqela kunye nabanye abadlali ababini kakhulu. Bakuba kwiqela ukuya abalahli imibhiyozo enkulu, awalenzayo lokuba, ngenxa yonke italente kufuneka, baya kuphumelela 5, 6, 7 - Mhlawumbi nangakumbi - Championships njengeqela. Ngoko ke wonke usivile nangokugasa, they've wayiva yonke bebabaza ngeli qela super. Ke kaloku, xa liqala kufuneka ubonise yaye bahla-. Ngaba eli qela iphupha emangalisayo ukuba woyise bamema ngokwakho ukuba? Nangabeendaba bukela kwaye uhlolisisa zabo zonke izimbo ukubona ukuba aba onembali iqela wonke wayenethemba.
Kakuhle ngendlela efanayo, iqonga elibekiweyo uYesu ukubabonisa ngokwakhe ukuba unguNyana kaThixo. uya kumkholisa uThixo?
Sinako ukucinga uAdam kumyezo. Wenziwa ngokomfanekiselo kaThixo, ukubonakalisa uzuko God's ngendlela eyodwa. Kodwa ke umhendi, inyoka uzayo uEva uyazikhohlisa bobabini. Bengamthobeli uThixo, ukukholelwa kubuxoki inyoka ngenxa yenyaniso kaThixo. UAdam akazange kuba uThixo wamenza ukuba abe. Sibona kwamaSirayeli entlango ukungaphumeleli ukuthobela uThixo. Sibona le kwaye kulo lonke iZibhalo. UThixo wenza indoda yokuzukisa kuye, kodwa umntu uyasilela, bangawaphulaphuli uThixo.
Ngoko ke uAdam wesibini baya kuba nako ukwenza into yokuqala ukwenza? UYesu uya kuba nako ukwenza izinto bakaSirayeli ukuyenza? UMtyholi uyeza kwaye wayelinga uYesu iintsuku ezimashumi mane. UYesu ukubonisa ukuba ungubani yabhengeza ukuba. uYesu ibonisa Ukuba unguNyana kaThixo beza asisindise ezonweni zethu kwaye ungumbingeleli yethu phezulu ongenasono. Kwaye uMoya oyiNgcwele wamthumela khona ukwenza kanye loo nto.
ngoku, Ndiya Musa Ndifuna ingongoma yam ukuba abawuqondi ukuba kuthetha ukuba uThixo ngokwakhe walinga uYesu ukuba enze okubi. Oko asichananga. Kodwa ke kucacile kakhulu eBhayibhileni ukuba kuthi akanakuhendeka kokubi akavuzeli ngaphandle ulongamo God's. It's na into akahexa phantsi radar. Kukho mntu na nto yonke indalo engaphandle kolawulo lwakhe. UThixo mkhulu ngokupheleleyo. Akukho nto ehlabathini yokuba inokwenzeka ngaphandle kwemvume uThixo wethu enguMongami. Le isilingo eyenzeka ngemvume kaThixo. UThixo wavuma waza yenzelwe ukusebenzisa wabumisela uzuko yakhe ngoYesu.
Bazalwane noodade, James yenza kucace gca ukuba xa abahendwayo thina ke ehendwa nguThixo. Kodwa siyazi ukuba uThixo uvumele uhendo kwaye uceba ukusebenzisa wabumisela uzuko lwakhe. UThixo ubuhlungu ngenxa yokuba kukho imikhosi ububi ehlabathini ezizama ulwe ngamandla aKhe ezingakususa umendo wobulungisa. Kodwa siyazi ukuba abo tempters ukuphendula kuBawo waseZulwini. Yaye uya kusebenzisa ungawafumani uzuko lwakhe.
Ngoku ndiyazi kukho abaninzi bethu abaye maxa iingcamango emnxinwa indlela bamzukise uThixo ihlabathi. Sicinga ukuba uThixo uzukisiwe kuphela ukuthobela zoluntu ezifana ukwabelana yeVangeli nabamelwane bethu, okanye sisalusa abangenamakhaya, okanye ukushumayela. Ndifuna ukwazi ukuba le asiyiyo uhlobo kuphela ukulululamela ibalulekileyo. Zombini oluntu nawabucala ukuthobela umcimbi kakhulu kakhulu. Akukho mfuneko yokuba ube abaphulaphuli ukwenzela ukuba bamzukise uThixo Universe.
thina xa zabucala, kwaye abahendwayo kwisono, UThixo uzukisiwe kukuthobela kwethu. UThixo uzukisiwe xa sixhathise ubuxoki Ahendwa lutshaba, ukulandela imithetho kaThixo wethu olungileyo. Uzukisa ukulunga kwakhe, nenkoloseko yakhe, namandla akhe ukuba asindise aboni. Ngoko abazalwana noodade, lonke ixesha uThixo ikuvumela ukuba ahendwe, iqonga omiselwa ukuba bamzukise uThixo akholwe phezu ubuxoki yotshaba.
UThixo abe nenjongo nokusivumela ukuba ahendwe. Kule meko uThixo ubonisa uYesu unguNyana kaThixo ongenasono, ngubani singakuvumeli ukuhendeka boMtyholi.
II.Weakness Akakhethi njengesizathu uyekelela esilingweni
Akadla nto ngezo ntsuku, kwaye ekupheleni kwazo walamba.
Njengoko iNkosi uYesu uhendwa, Yena kwimeko babuthathaka nabafuna. Okubhaliweyo kucacile ukuba uYesu sele ukutya 40 iintsuku. Ekupheleni kwaloo 40 kweentsuku uYesu wayelambile - ethe uhlobo kucacile; ucinge bemkhanyela ngokwakho ukutya 40 mihla yonke.
Sisoloko ungathanda ukuba bacinga ukuba uYesu superman, kodwa Yena wa superman. Yena uThixo-mntu. Kukho umahluko. UYesu wayengumntu. Ngoko ke khange ube nakusinda ukudinwa, okanye ubuthathaka, okanye indlala. Kule meko, USathana ulinga uYesu ngephanyazo abasemngciphekweni njengoko lulambile. Yaye usasihlasela uYesu ngokukodwa kwiindawo ukuba badlale ukuba ubuthathaka bakhe yangoku emzimbeni.
Yena akahendi uYesu bolawulo kwangoko kakhulu, ngokutya, ngezinto ngokufanelekileyo ukuba ilifa. Yena akahendi uYesu izinto kuba layo, kodwa uYesu uyakhanyela ngokwakhe. UYesu uzibonakalisa apha, kuba unyana womntu engezanga kulungiselelwa, kodwa ukukhonza.
Bazalwane noodade, akufuneki isidenge ngokwaneleyo ukuze sicinge ukuba uSathana uya kuthi Sukuya ngamaxesha bethu ubuthathaka. Ndafunda uthatyathwe kule veki wathi, "Ithuba uza enkqonkqoza kanye kuphela, kodwa isilingo phezu yokunkqonkqoza. "Izilingo engashiyi ngokulula. Sihendo uya kuhlala kwaye banxibe uhle. Kanye Villains kwi iimovie ngubani nizisukele amaxhoba de ekugqibeleni atripe okanye udinwe kakhulu ukuba ukusebenzisa nayiphi ngaphezulu. Kwaye uSathana akayi ukuba kube lula kuwe ngamaxesha ubuthathaka. USathana utshaba lwethu!
Oku kuba njengomkhosi ukugcina ubuthathaka leentshaba zabo, kwaye isigqibo ukumsa isuke kubo. kakuhle, hayi, that's hayi indlela osebenza ngayo. Xa imikhosi exhobileyo ukubona ubuthathaka, ukuba lixesha egqibeleleyo kubo ukuhlasela kuba kungenzeka lwempumelelo eziphezulu. Kakuhle ngendlela efanayo, Umhlaba, inyama, kwaye umtyholi akayi kubeka off ngobuxoki babo ngamaxesha ubuthathaka. Kwinyani, baya kuhlasela kuphela ngaphezulu.
Ngoko uYesu wakwazi ukuxhathisa isilingo boMtyholi ngexesha lakhe ubuthathaka ngayo? It's kuyinyaniso ukuba uMtyholi zange ithuba ukukhokela uYesu esonweni, kodwa njani uYesu wonditshitshisela kuye? kakuhle, ukuba siziqwalasele isicatshulwa ngezantsi, sifuna ukubona ukuba uYesu wenza oko uAdam akazange enze. UYesu wayezikholelwa iLizwi likaThixo, phezu iLizwi uSathana. Ke uYesu wazithoba ukuthanda Kwakhe intando kaBawo. Xa kuvela isilingo, thina shouldn't ukuzama ukuxhathisa ngokuthi ukuzimisela nje. Kuba inyaniso namnye kuthi nomelele ngokwaneleyo.
Ukuxhathisa izilingo ngamaxesha ubuthathaka iqala indlela phambi isilingo ngokwayo. Engavumiyo ukuhendwa uza kudibana kwiveki ezayo iqala le veki. Yintoni ukungenisa? Yintoni ngokuzalisa wena kunye? Njani na ukondla ukholo lwenu? UYesu buthathaka. Kodwa nangona uYesu ungatyanga, Yena ezele nguMoya. Kufuneka bafune, njengoko Efese ikhuthaza, ukuba uzaliswe -, nababephethwe - uMoya kaThixo. Sifanele sibe ubuso bethu iLizwi laKhe, apho unika buxhaswe ukholo lwethu kwizithembiso zakhe. Kwaye kufuneka benze oku kunye nabazalwana bethu noodade elukholweni.
Kukho amaxesha ebomini bethu xa siziva amandla ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Sibe nokuba badiniwe, okanye hlale, okanye ugula, okanye mhlawumbi we're kangaka olungahexiyo amandla ethu ukuba we're buthathaka singazi. Kodwa kungakhathaliseki ukuba buthathaka, it's njengesizathu sinokunikezela. Kwezi zihlandlo babuthathaka yintengiso umhendi inokubonakala nomtsalane, kodwa iLizwi likaThixo kusenjalo, kwaye ukuhenda kaSathana Kusekho ubuxoki.
Xa nguwe lufune ukuziphatha kakubi ngokwesini khumbula ukuba uThixo wathi, "Uze ngokwakho, nathengwa ngexabiso. Mzukiseni ke uThixo ngomzimba wenu. "Yaye xa nguwe ndilingeka ukuba nekratshi kwaye lokuzingca khumbula ukuba uThixo wathi, "Musa khangela nje wethu ngokwakho kodwa iimfuno zabanye." Ngamaxesha ubuthathaka simele, njengoYesu, ukubambelela iLizwi likaThixo, amve.
III. UMhendi sele ezoyiswa
Ukufunda le ngxelo siye sithambekele kukudimaze, ukucinga, "Umntu, UYesu ingcwele kangaka Akwaba kufana naYe,"okanye, "Umntu, Ndiqhuba ifana uAdam kuqala kunolo lwesibini. Mna ngakumbi uYona lukaYesu. "Abazalwana noodade, ukuba kunjalo ngamnye abangamaKristu non-lamaKristu. Sonke kufana uYona kunokuba uYesu.
Kodwa into ukulululamela kaYesu sifunda ngayo apha kukuba uYesu akakho umntu nje omnye. UYesu nje omnye namnye kuthi kwenzeke ukuba lowo abathobelayo. Hayi, UYesu uAdam entsha ababeze ukumela ngokutsha. Sokuthobela kukaYesu ekholisa uThixo kuphela ngaloo mzuzu, kodwa uYesu wawagcina kuthi ukuba siya kuba sikholisa uThixo. UYesu wenza into couldn't ntoni. Udlula iimvavanyo ukuba uAdam kudlula nokuba bakaSirayeli kudlula - kwaye ukuba kuye kudlule akukho mntu phambi okanye emva. UYesu wagcina namnye kuthi apho ndandingasakwazi. UYesu laloyisa iintshaba namnye kuthi wonditshitshisela. Kwaye oku ukoyiswa ethile, entlango, wayebonisa ukuba ukoyiswa kokoyisa uSathana ukuba kuya kwenzeka ekupheleni Luke's ezilungileyo.
Nangona uYona kukrakra kakhulu bade bashumayele yeentshaba zakhe, iNkosi uYesu weza emhlabeni wafela iintshaba zakhe. Emnqamlezweni uYesu kuhlawulelwa lonke ixesha single ukuba siye elinikiweyo esilingweni. Lonke ixesha elinye. Kuba ikholwa, akukho namnye nesono sethu, ukuba uYesu akazange ukuhlawulela. Wesuka uYesu engcwabeni, koyisa isono, ukufa, kwaye umtyholi. UMtyholi woyisiwe. Ke ukuba uzakujika ezonweni zethu size sibe nokholo lwethu kuKristu esinokufumana zonke nemivuzo ayifumanayo. Ukubona sokuthobela kukaYesu kumele ku si, oko kufanele ukuba.
Le veki xa silingwa ukuba isono, khumbula ukuba utshaba lwakho sele boyisiwe yakho leNkosi. Wena Musa sibavumele ukuba isono senu. Umhendi sele ezilahlekileyo. imixokelelwane zakho yaphulwe. Hambani inkululeko ezithengwayo wena emnqamlezweni. Musa imveliso neemfuno utshaba boyiswa. UYesu wafa waza wavuka, ukuba siya kuba nako ukuxhathisa umhendi, kwaye zikhangeleke kuye. Siya indwelled nguMoya omnye kakhulu kwaye iphathe isixhobo kanye.
Xa sihendwa, let's khumbula ukuba UThixo evumela kwaye usebenzisa isilingo, ukuba ubuthathaka asinto njengesizathu uyekelela esilingweni, kwaye oko unihendile sele woyisiwe.
Umbhali Hebhere ujonga kwesi sihendo kwaye ufumana ukhuthazo olukhulu khona:
Kuba asinambingeleli mkhulu ungenako ukuvelana nezilwelwe zethu, kodwa ke lowo, sinowahendwayo ngeento zonke, kanye njengoko -Ukanti wayengenasono ngaba thina. Makhe angaqhagamshelana itrone yobabalo ngokuzithemba, ukuze samkeliswe inceba, sifumane ubabalo lokusinceda ngexesha yethu imfuneko. (Hebhere 4:15-16)
INkosi uYesu uyavelana nathi. Uye ngeento njengoko sihendwa, kodwa zange khe wamnika ekwenzeni kuye umbingeleli omkhulu egqibeleleyo. Ngoko ke ukusondela kwitrone yakhe ngokuzithemba, ngokucela inceba nobabalo. Let's ndiye kuye ngoku.
Jem973 • EyeDwarha 29, 2013 ngexesha 2:26 pm • impendulo
Ndiyabulela kakhulu ekufundiseni ! Yinto kakhulu ukwenzela ukuba ukwazi ukuba uThixo wethu wazi zonke izilingo esijamelana nazo ! Yinto kakhulu ukwenzela ukuba ukwazi ukuba uYesu sele walingwa ngaphandle wanikezela, bazi ukuba uMtyholi oyiswa !!
Ndiyabulela kakhulu ukhuthazo ! God bless ubulungiseleli bakho kunye nosapho lwakho.
(Uxolo ngo IsiNgesi yam, Ndiyavuya French)